खानेपानीको जारमा किरा फेला पर्यो - Janadesh Khabar
१८ फागुन २०७७, मंगलवार
खानेपानीको जारमा किरा फेला पर्यो
जनादेश खबर	काठमाडौं	असोज २३, २०७७
सिलबन्दी भएको खानेपानीको जारमा किरा भेटिएको छ ।
काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, मूलपानी–८ स्थित सिद्धिलक्ष्मी अक्वा पानी उद्योगबाट उत्पादित १९ लिटरको अक्वा फ्रिडम ब्रान्डको सिलबन्द जारको पानीमा किरा भेटिएको हो ।
पानीमा किरा भेटिएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पानी उत्पादन गर्ने उद्योगमाथि कारबाहीका लागि उजुरी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बिहीबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी गरेका हुन् ।
अध्यक्ष महर्जनले अक्वा फ्रिडम ब्रान्डको सिलबन्द जारको पानीमा किरा भेटिएपछि कारबाहीका लागि विभागमा उजुरी गरेको बताए । उनले किरा परेको पानीको जारको पानीलाई ६० रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएको बताए ।
खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार प्रशोधित पिउने पानीको गुणस्तर निर्धारण भएको छ । प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ खानेपानी उद्योगी, ढुवानी व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीहरूले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ मा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने व्यवस्था छ भने दफा १९ मा वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ‘सोही व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अक्वा फ्रिडम ब्रान्डको सिलबन्द जारको पानीमा किरा पाइएको उजुरी आएको बताए । उनले उपभोक्ताकर्मीबाट पानीको जारमा किरा पाइएको उजुरी आएपछि विभागले पानीको परीक्षण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाएको बताए ।
महानिर्देशक सुवेदीले पानीको जार परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन पाइयो भने उद्योगीलाई कानुनी कारबाही हुने बताए ।
२३ असोज २०७७, शुक्रवार ०८:०९ बजे प्रकाशित
डा. गोविन्द केसीको अनशन तोड्ने तयारी
१ हजार दिने सहमति रहेछ भन्दै वलात्कारीलाई न्यायाधीशले छाडिदिए
प्रचण्ड भन्छन्- केपीहरु त झन जिते जस्तो पो गर्छन, के हो ?
यस्ता छन मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
पूर्वराष्ट्रपति सार्कोजीलाई तीन वर्ष जेल
मुलुकलाई एकताबद्ध गराउन स्रष्टाको उल्लेख्य योगदान रहेको राष्ट्रपतिको भनाई
केपी ओली पाहा पछारिएझैं पछारिए : प्रचण्ड
जामाखोला जलविद्युत् आयोजना २ वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा
प्रचण्ड-माधव समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको आन्तरिक निर्णय
जसपा सरकारमा जाने, बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पुनः बढ्याे
प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिने ओलीको घोषणा